Read Along App Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Vakio miaraka ny fampidinana fampiharana ho an'ny Android 
Te hianatra fiteny samihafa ve ny zanakao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo fampiharana Android tsara indrindra, fantatra amin'ny anarana hoe Read along App. Izy io dia fampiharana fanabeazana Android, izay manolotra fiteny samihafa hianarana anisan'izany ny Anglisy, Espaniôla, Portigey ary maro hafa.
Araka ny fantatrao, ny ankizy latsaky ny telo ambin'ny folo dia afaka mianatra fiteny efatra. Mila manatsara ny fahaizany fotsiny ianao. Amin'ny maha-ray aman-dreny anao dia anjaranao ny mampamirapiratra kokoa ny zanakao noho ny hafa ary ny dingana voalohany dia ny fiteny.
Mba hahatonga ny ankizy hianatra fiteny samihafa dia tsy voatery hanery azy ireo ianao. Mila mampiasa ity fampiharana ity ianao, izay manome serivisy ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Manolotra endri-javatra fototra ahafahan'ny ankizy rehetra manatsara ny fahaizany miteny ary mampitombo ny fahatokisany.
Misy endri-javatra mahavariana kokoa amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminao amin'ny antsipiriany. Noho izany, raha te hampiasa ity fampiharana ity ianao dia tokony hianatra kely alohan'ny hampiasana azy. Noho izany, mijanòna aminay fotsiny dia hozarainay aminao ny hevi-dehibe rehetra.
Topimaso momba ny Read along App
Izy io dia rindrambaiko Android maimaimpoana, izay novolavolain'i Google LLC. Ny antony fototry ny fampivelarana ity fampiharana ity dia ny fanolorana fomba fanabeazana tsara sy mahasalama ho an'ny ankizy. Manolotra lite lite isan'andro mifototra amin'ny mpianatra hianatra kely isan'andro sy hahatsiarovany izy.
Google mamaky miaraka dia novolavolaina tamin'ny fomba tsara indrindra ho an'ny ankizy. Manolotra mpampianatra efa tafiditra ao anatiny Diya izy, manampy ny ankizy hianatra zavatra sy hanohana azy ireo amin'ny asa sarotra izy. Ny endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana ity dia milaza amin'ny zavatra rehetra momba ny fiteny rehetra ity zazavavy ity.
The App fampiharana dia manolotra fiteny samihafa ao anatin'izany ny sasany amin'ireo fiteny indiana eo an-toerana mankany amin'ny teny anglisy, izay ahafahan'ny olona rehetra avy amin'ireo faritra ireo hahatakatra sy hanao ny tsara indrindra. Voatonona ny sasany amin'ireo fiteny ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Misy zavatra maro hafa, izay azonao jerena amin'ny fidirana amin'ity fampiharana ity. Ny olona rehetra amin'ireo fiteny ireo dia afaka mampiasa ity fampiharana ity ary mianatra haingana ny teny anglisy. Manolotra hetsika samihafa ho an'ny ankizy izy io, izay ahafahan'izy ireo mianatra mamaky teny sy miteny amim-pahatokiana kokoa.
Manolotra ny ankizy hanatsara ny fanononana azy ary koa ny famakiana. Ny ankizy dia tsy maintsy manonona teny samihafa sy vaovao isan'andro hanatanterahana asa iray. Izy io koa dia manome karazana kilalao mahaliana amin'ny alalàn'izy ireo mianatra haingana kokoa.
anarana Vakio miaraka
Developer Natolotry ny Google LLC
Anaran'ny fonosana com.google.android.apps.seekh
Endri-javatra manan-danja amin'ny Read along App
Raha nizara ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny fiteny etsy ambony izahay, saingy misy mihoatra noho izay azonao zahana. Ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hiresaka ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Mianatra amin'ny alàlan'ny Lalao
Hetsika tsotra nefa mahomby
Azo idirana ivelan'ny Internet
Ahoana ny fampidinana ny famakiana app along?
Bolo Apk dia hita ao amin'ny Google Play Store, fa raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao. Misy ihany koa eto, mila mitady ny bokotra download ianao ary tsindrio eo. Ny fampidinana dia hozaraina ho azy. Mizara rohy izahay aorian'ny fitsapana, noho izany dia aza mitsahatra rehefa manindry.
Rehefa vita ny fampidinana dia tsy maintsy manao fanovana vitsivitsy amin'ny toe-javatra ianao. Mandehana fotsiny any amin'ny Settings sy Open Security Panel, avy eo Checkmark 'Unknown Source' ary miala amin'ny toe-javatra. Ankehitriny ianao dia afaka mametraka ity fampiharana ity amin'ny fotoana rehetra.
Read along App avy amin'i Google no fampiharana tsara indrindra ianarana ho an'ny ankizy. Noho izany, mahazo fidirana maimaim-poana ary manomboka mianatra. Io no fampiharana manatsara ny fahaizan'ny zanakao. Ampidino avy amin'ny bokotra etsy ambany ity fampiharana ity ary zahao hatrany ny anay Website ho an'ny hafa.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, Google Read along, Google Read along App, Vakio miaraka amin'ny App Post Fikarohana
Franmoza Injector Apk Download Ho an'ny Android 
Camp Pinewood Apk Download ho an'ny Android 